Karoora namoota miliyoona 70 ol fayyadamatoota ibsaa taasisuuf qabame
Seena madda anniisaa elektiriikii Itoophiyaa keessatti isa jalqabaa kan ta’e hidhaan Abbaa Saamu’eel laga Aqaaqiirraa hidhame anniisa elektiriikii Meeggaa waattii 6.6 maddisiisu bara 1932 kaase ummata biyyattii fayyadaa tureera ammas fayyadaa jira. Baay’inaafi fedhii ummataa dabalaa dhufeen walqabatee lageen hedduun hidhamuun anniisa elektiriikii maddisiisaa jiru.
Waggoottan kurnan lamaan darban dura uwwisni humna ibsaa %10 gad ture yeroo ammaa %25 irra ga’eera. Ta’us ummatni biyyattii miliyoona torbaatamaa ol ta’an ammayyuu dukkana hamaa keessa jiru.
Wiixata darbe Ministeerri Bishaan, Jallisiifi Elektiriikii karoora bara 2017 ALItti uwwisa humna elektiriikii guutummaatti waliin ga’uuf baafate mata duree, “Ifa hundaaf” jedhurratti qaama dhimmi ilaallatu waliin marii taasiseera.
Baankii addunyaatti, daarektarri Itoophiyaa, Sudaaniifi Sudaan Kibbaa Aadde Kaaroliin Tarki, Itoophiyaan guddina dinagdee jabaa galmeesisuusheetiin galateeffatanii, hanqinni anniisaa elektiriikii garuu gufuu guddaa ta’uu hubachiisaniiru. Akka isaan jedhanitti sochii industiriiwwanii guddina biyyaa si’eessan dhugoomsuuf anniisaan elektiriikii murteessaadha. Hanqina anniisa elektiriikii hamaan xaxamanii tajaajila dhaabbilee fayyaa si’ataa kennuun fayyaa hawaasaa mirkaneessuun abjuudha. Bakka ibsaan hinjirrettis qulqullina barnootaa kan yaadamu miti. Baankichis kana hubatee sochii hanqina ibsaa biyyattii furuuf taasifamurratti onnatee hojjetaa jira.
Ministirri Muummee Itoophiyaa Obbo Haayilamaariyaam Dassaalanyi gamasaaniin dukkana ummata biyyattii miliyoonaan lakkaa’amuu ibsuun taatee yeroo gabaabaa ta’uu dubbatu. Hanga ammaatti hurka lafaa jalaa, humna bubbee, soolaariifi lageen hidhuun anniisaa argameen miliyoonota fayyadamoo taasisuun danda’amuusaa eeranii, har’as fedhii miliyoonotaa guutuuf kutannoon hojjetamaa jira jedhu.
Kanaaf ragaan hidhaan guddicha haaromsa biyyatti kan anniisaa meegga waatii kuma 6.4 maddisiisuuf ijaaramaa jiru fudhachuun gahaa ta'uu kaasanii, bifuma walfakkaatuun madda anniisaa qilleensa faaluurraa bilisa ta’aniifi haarawuu danda’anirratti xiyyeeffannaan hojjetamaa jira jedhu. Geejiba irraa eegalee dhaabbileen tajaajila ummataa guutummaatti anniisaa elektiriikiin gara fayyadamutti akka ce’anitti sochiin taasifamaa jiraachuus himu.
Madda anniisaa gabbisuu qofa osoo hintaane anniisaa maddus qixa sirriin ummata biyyattii mara biraan ga’uurratti to’annoofi hordoffii mootummaa olaanaa ta'uu Obbo Haayilamaariyaam eeranii, raabsa humna ibsaa keessatti dargaggootni biyyattii hedduun akka hirmaatan akka taasifamu ibsu.Kun ammoo dhagaa tokkoo shimbira lama akkuma jedhamuu gama tokkoo uwwisa humna ibsaa mirkaneessaa gama biraan ammoo dargaggootaaf carraa hojii uumuudha jedhu.
Gama madda anniisaa garaagaraa babal’isuunis hojii hojjetamaa jiruun hidhaa guddicha dabalatee hojiiwwan ijaarsa wayita xumuraman anniisaa meeggaa waatii kuma 14 ol kan maddisiisan ta’uu ibsanii, KGT 2fa keessatti sochii taasifameenis hanga ammaatti anniisaa meeggaa waatii kuma afurii ol maddisiisuun danda’amuusaa addeessu.
Haaluma walfakkaatuun Ministirri Ministeera Bishaan, Jallisiifi Elektiriikii Doktar Injinar Silashii Baqqalaa akka jedhanitti, rakkoo har’aa caalaa carraafi abdiin gara fuulduraa olaanaadha. Karoora bara 2017tti dhiyeessiifi uwwisa humna ibsa biyyattii guutummaatti dhugoomsuuf yaadame keessatti bara 2010-2014tti maatii miliyoona 4.5tu fayyadamoo taasifama. Sochii uwwisa humna ibsaa dhugoomsuuf taasifamu kana dhugoomsuufis baasii doolaara Ameeriikaa biliyoona tokkoofi walakkaa yommuu gaafatu maddi baasii kanaas baankii addunyaa, dhaabbilee gargaarsaafi mootummaa Itoophiyaati.
Torban kana/This_Week 43235
Guyyaa mara/All_Days 1468015